မတူညီ ကွဲပြားခြားနားမှုဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းကို ခွဲထွက်ပါ။ | မာသင်
မတူညီ ကွဲပြားခြားနားမှုဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းကို ခွဲထွက်ပါ။
ဒီဇိုင်နာ ရေသန့် ထွက်လာကတည်းက သာမာန်ရေသန့်ဗူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရေသန့်ဗူးဝယ်သူတိုင်းသိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဗူး ဒီဇိုင်းဆိုတာထက် မတူညီ ကွဲပြားခြားနားမှုရဲ့တန်ဖိုး ပေါင်းထဲ့မှုကြောင့် ရေသန့်ဗူး ထက်ပိုတဲ့ ရေသန့်ဗူး ဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့ သောက်သုံးဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
Howard Schultz ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် အီတလီ ကိုရောက်တုန်းအတွေးတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ကော်ဖီဆိုင် ဆိုတာ ကော်ဖီပူပူကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ရောင်းတာ ထက်ပိုတယ်။ ကော်ဖီရဲ့နောက်ကွယ်က လူနဲ့ကော်ဖီရဲ့ဆက်စပ်မှု၊ တတိယအိမ်ဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာ ရဲ့မွေးဖွားခြင်းအစပြုပြီး ကော်ဖီဆိုင် ချိန်း ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ တတိယအိမ် အိုင်ဒီယာ ကို အောက်ပါလင့်တွင်ကြည့်ပါ။
IKEA ပရိဘောဂ အရောင်းဆိုင်
“a better everyday life for the many people” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ အတူ အရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေကို သက်သာတဲ့ဈေးနုန်းတဲ့ ဈေးကွက်ထဲတင်သွင်းလာခဲ့တဲ့ IKEA.
အရောင်းဆိုင်တွေမှာ မိသားစုကစားကွင်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ ထားပေးထားပြီး better everyday life ဆိုတာ ပရိဘောဂ ရောင်းတာထက်ပိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပရိဘောဂ အရောင်းဆိုင်ချိန်း တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မတူညီကွဲပြားမှု ကို ဈေးကွက်က တန်ဖိုးတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အခြားသက်သေများကတော့ …..
ကုမ္မဏီရဲ့logo အမှတ်တံဆိပ်မတူတာကို ပြောတာမဟုတ်သလို၊ Packaging ထုပ်ပိုးပုံမတူတာကိုလဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ပင်မ အိုင်ဒီယာ မတူညီတာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု ရဲ့ပင်မ အိုင်ဒီယာ ဆိုတာ …အချက် (၃) ချက်ကနေ စတင် စဉ်းစားရပါတယ်။
(၁) ဈေးကွက်ရဲ့အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းခြင်း
ရက်ကွက်မှာ သောက်ရေသန့်ရဖို့အခက်အခဲရှိနေသလား၊ ဘာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသလဲ။ ကူညီဖြေရှင်းပေးရာကနေ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
(၂) လက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှု ကို ပြုပြင်ဆန်းသစ်ခြင်း
အိမ်တိုင်ယာရောက် one-stop service အနေနဲ့အဲယားကွန်း လိုက်လံပြင်ဆင်ပေးသလား။ ဒါမှမဟုတ်. ငွေလွဲတာကို ဘဏ်သွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာပဲ ဖုန်းကနေ တစ်ထိုင်တည်း လွဲလို့ရတာလား။
ipad, iphone ဆိုတာ ဈေးကွက် ကသိလို့ဒီလို ကုန်ပစ္စည်းမျိုးတောင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ Apple ကုမ္မဏီ က ဈေးကွက်မသိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊ဝန်ဆောင်မှု တစ်မျိုးကို အသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု မှာ ပါဝင်ခြင်း ဆိုတဲ့( Sense of belonging) စိတ်ဓတ်ရှိကြပါတယ်။
ဘယ်သူမှ အထီးကျန်ခြင်း ဆိုတာ မခံစားချင်ကြပါ။
အဖွဲ့ တစ်ခုခု ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် …ဘယ်အဖွဲ့ဝင်လဲ ဆိုတာ ကတော့ ..စားသုံးသူ ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမားရိုးကျ အဖွဲ့ဝင်လား ။
မတူညီ ထူးခြားတဲ့၊ ဆန်းသစ်မှု တွေကို နှစ်သက်လိုလားတဲ့ အဖွဲ့ ဝင်လား။
✔️Coke သောက်သူလား၊ Pepsi သောက်သူလား။
✔️Mac ကွန်ပျူတာသုံးသူလား၊ PC သုံးသူလား။
✔️Rolex နာရီသုံးသူလား၊ digital နာရီသုံးသူလား။
✔️Mercedes ကားစီးသူလား၊ Toyota ကားစီးသူလား။
✔️Apple iphone (ios) သုံးသူလား၊ Android သုံးသူလား။
သေချာတာကတော့ ….မတူညီကွဲပြားခြားနားမှု က တန်ဖိုး ပိုလေ့ရှိပါကြောင်း …ပါခင်ဗျာ။
မတူညီ ကွဲပြားတဲ့အိုင်ဒီယာ ရှိတဲ့သင်သိတဲ့လုပ်ငန်း အမည် နဲ့ဘယ်လို လုပ်ကြတယ် ဆိုတာ အများလေ့လာ သိရအောင် မန့်ခဲ့ပါ။